scheduleआइतवार जेष्ठ १२ गते, २०७६
काठमाडौँ, २० मंसिर । बुधबार उच्च बिन्दुले घटेको शेयर बजार आज भने सामान्य अङ्कले बढेको छ ।
त्यस्तै कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था, महिला सहयात्रा माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था, यूनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर, काबेली विकास बैंक, रैराङ हाइड्रो पावर कम्पनी, आरम्भ माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले गुमाएका छन् । रासस
शेयर बजार: दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से
कति छ आज सुनचाँदीको मुल्य ?
कृषिमन्त्रीको आग्रह- जीविकोपार्जन हुने मात्र होइन, अब नगदेबाली लगाउनुहोस्
३१ अर्ब राजस्व सङ्कलन
आज कति छ सुनको भाउ ?
शेयर बजार : चार अङ्कले बढ्यो नेप्से
सुनको मूल्य स्थिर, कतिले हुँदैछ कारोवार ?
४८ मेनपावर कम्पनीको कारोवार बन्द
सर्लाहीका उखु किसानको रिले अनशन स्थगित
जेठ १४ देखि खुल्दैछ यो आइपिओ, क–कसले दिन पाउछन् आवेदन ?
एटिएममा नेपाली भाषा राख्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
तोलामा कति छ सुनको मुल्य ?
सुनचाँदीको भाउ स्थिर
डिजेल र पेट्रोलको भाउ घट्यो
मेस्सीले विपक्षी खेलाडीलाई ‘गधा’ भनेपछि !
एजेन्सी, १२ जेठ । बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सी भद्र र नम्र खेलाडीको रुपमा चिनिन्छन् । कठिन अवस्थामा समेत मैदानमा...
‘बार्सिलोनालाई नयाँ प्रशिक्षकको आवश्यकता, भल्भरडेको ट्याक्टिसले काम गरेन’
काठमाडौँ, १२ जेठ । बार्सिलोनाले यस सिजन एउटा उपाधिमा चित्त बुझाउन बाध्य बन्यो । यस सिजन तिनवटै उपाधि जित्ने तयारी गरेको बार्सिलोनाले...
नेपाली फिल्म जात्रैजात्राको कमाइ कति ?
काठमाडौँ, १२ जेठ । गत हप्ता शुक्रबारदेखि प्रर्दशनमा आएको नेपाली चलचित्र “जात्रैजात्रा” को टोलीले पोखराका हलमा भ्रमण गरेको...
‘अरुको घर भत्काउन सकिन मैले’
काठमाडौँ, १२ जेठ । बलिउडमा केही यस्ता अभिनेत्रीहरु रहे जसले विवाहलाई खासै महत्व दिएनन् । पछिल्लो समय विवाहभन्दा पनि एकल जीवनलाई...
राजधानीको दुई ठाँउमा विस्फोट, तीन जनाको मृत्यु
काठमाडाैं, १२ जेठ । राजधानीको सुकेधारामा आइतबार सिलिण्डर बम पड्किँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ । सुकेधारा चोकमा रहेको एक सैलुनमा ...
‘२१ घटनाले बताउँछन्, ओलीमा शक्तिको असीमित तीर्खा छ’
काठमाडौँ, १२ जेठ । २१ घटनाले बताउँछन्, ओलीमा शक्तिको असीमित तीर्खा छ । मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, विश्वविद्यालय, प्रेस, मानव...
विस्फोटमा ज्यान गुमाउने तीनैजनाको सनाखत
काठमाडौं, १२ जेठ । काठमाडौंका दुई ठाउँमा भएको विस्फोटमा ज्यान गुमाउने तीनै जनाको सनाखत भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार...
मध्यपूर्वमा अमेरिकी सेना कमजोर हुँदै गएको छ : इरानी कमाण्डर
सुनिल बराल/एजेन्सी, १२ जेठ । मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति इतिहासमा नै कमजोर भएको एकजना वरिष्ठ इरानी सैन्य अधिकारीले...